Iingubo zasebusika ngeTights - Isinxibo Sabafazi Casual Casual
Iingubo zasebusika ngeTights
Izambatho zasebusika ezintle ezineeTights
Xa ufuna ukubukeka ungakholeleki kwaye ugcina ubusika ebandayo, iimpahla zobusika ezineethayithi ziyimpendulo efanelekileyo. Kukho amakhulu eendlela zokwenza iimpahla ezintle kubandakanya iithayithi; ezi 10 zijongeka ngendlela yokubaleka zizikhuthazi ezimbalwa. Kuboniswe apha, ilokhwe epinki kunye nenavy elungelelanisa iithayithi zasemanzini zibukeka zintle kwaye zipholile.
indlela yokwenza umhla wokugungqa isitulo
Iingubo zasebusika kunye nokuqina
Iithayithi zenza izinto zendalo ezinxibe ubusika ezenziwe ngelaphu ezinzima. Kule ndibano kaJean-Charles De Castelbajac, ilokhwe yobunzima bobusika ijongeka intle kunye neethayithi ezi-opaque.
Ukuqina ngombala ongqindilili kusebenza kakuhle ngengubo encinci, njengoko kubonisiwe kolu jongo nguOlimpia Le Tan. Ayisiyombala ubomvu kuphela umbala omkhulu wasebusika, yongeza i-pop enamandla yesitayile efanelekileyo xa ufuna ukuqaqambisa inkangeleko yakho.
Chic kunye Professional
Ingubo ebusika-ilokhwe efanelekileyo yasebusika kunye nebhatyi, enje ngolu uyilo lukaValentin Yudashkin, ijongeka intle ngeethayithi ngombala omnyama. Uyilo lwezihlangu oluphefumlelweyo lwe-oxford lugcina ukubukeka kwe-chic kwaye kucocekile kunokuba kubukrelekrele.
Uyenza njani inki ye tattoo
I-Turtleneck kunye ne-Sheer Skirt
Iithayithi zinokukunceda ukuba ujonge ngokukhangeleka ngokuhlwa ngaphandle kokubonisa ulusu. I-turtleck edityaniswe neblawuzi enemibala ikugubungela ngaphezulu ngaphezulu, ngelixa isiketi esine pateni ngaphezulu kweetights sinika umbono wesini ngelixa uhleli ugqunyiwe.
Isinxibo sasebusika esiqhelekileyo
Ijezi enepateni, isiketi esinee ruffles ezinamakhonkco, kunye neebhutsi ezinamatye kodwa ezinesitayile ezidityaniswe neethayithi zonke zisebenza kunye ukwenza isinxibo sasebusika esingaqhelekanga nesonwabisayo. Nangona imibala ingathathi hlangothi, iiteknoloji kunye noyilo zinika imvakalelo yokudlala. Kuxhomekeke kwindawo osebenza kuyo, imibala ethulweyo ithetha ukuba oku kunokuba sisinxibo esifanelekileyo somsebenzi.
Inemibala kwaye ilungelelaniswe
Nangona oku kujongeka kubandakanya imibala eliqela ukusukela kwipopu yekorale eqaqambileyo kwilokhwe ukuya kwizityebi zeerose shades kwidyasi yokudibanisa, imigca emnxebeni yesinxibo kunye nebhatyi iyenza ibonakale ineklasi kwaye iphucukile. Iimpawu ezihambelanayo zonyusa inkangeleko kolu luyilo nguAnna Sui.
Isikethi esineBelt esineBala kunye nejezi
Ijezi yanamhlanje enemibala emnyama, efana nale yomkhosi weenqanawa enesinqe esimnandi, inokudityaniswa nesiketi suede kwimbala eqaqambileyo yohambo lwasebusuku olunesibindi, njengoko kubonwe kule combo yiBalmain. Iithayithi, ezinxibe umthunzi ofanayo kwijezi, zigqamisa isondo kwaye zenze isitayile esimnandi. Sebenzisa ibhanti edibanisa nejezi kunye neethayithi ukutsala ukujonga kunye, okanye ukhethe ibhanti eyahlukileyo ukwenza inkangeleko ebonakalayo, eyahlukileyo.
ukuba wenze ntoni ngoncedo oludala lokuva
Ibhulukhwe ecoliweyo kunye neBlawuzi
Musa ukuyilahla loo bhulukhwe intle okanye iibhulukhwe zimfutshane kumqondiso wokuqala wekhephu! Banxibe ngoothayithi ukongeza umdla kwaye ubenze banxibe ubusika endaweni yoko. Isitayile esinesibindi esiboniswe apha sihamba kakuhle ngemibala yaso eqaqambileyo, ibhatyi echetyiweyo, kunye neethayile eziphakamileyo zethanga.
Ujongiwe ujonge ukujija
Ukubekwa kubalulekile xa amaqondo obushushu eqala ukwehla. Ijezi enqamlezileyo edityaniswe ngesiketi esihle kunye neethayithi kwiipateni ezidlalayo yenza ukuziva okuqaqambileyo, okudlala. Yonwaba ngokuza nembonakalo ecekeceke enezinto ezahlukeneyo kunye neepateni, uzifikelele ngeethayithi zobukeka obuhle ebusika.
Ngolunye uluvo malunga nokunxiba kwemozulu epholileyo okuphuma kwindawo yokubaleka ukuya kwilizwe lokwenyani, jonga ezona ndlela zinxiba kakhulu zokuwa kwabafazi.
Umtshato Imousine Ulutsha Impilo Iindleko Ze-Costume Iifowuni Ukuthenga Cell Phones Ukuhombisa I Icandles
Ifashoni Jew Jewelry
Iwayini Imiboniso Yesilayidi
ukuwa njani eluthandweni
zeziphi iingoma ezikwindawo yoluntu
Ungayiphendula njani i-imeyile yodliwanondlebe
yeyiphi imibala ekhupha amehlo aluhlaza
Umyalelo wabaphangi beemovie zecarbean